FAMETAVETANA ZAZA 3 TAONA : Nasain’ny mpitsara mifampiraharaha ny ray aman-dreny roa tonta
Araka ny efa notaterinay, tamin’ny sabotsy lasa teo, nisy zazalahy 12 taona nametaveta zazavavy 3 taona any Antsiranana ary natolotra ny Fampanoavana, ny alatsinainy teo. 7 octobre 2015
Tsy manaiky an’izany anefa ny ray aman-drenin’ny zazavavy ary heverin’izy ireo fa fanaovana tsinontsinona ny zanak’izy ireo. « Midika ve izany fa manomboka izao azon’ny zazalahy tsy ampy taona rehetra manerana ny Nosy manevateva zazavavy ary tsy azo saziana ? Fa angaha izany no lazain’ny lalàna velona ? Tsy manaiky io soso-kevitra nambaran’ny mpitsara io izahay ary takianay ny fampiharana ny lalàna », hoy ny fanazavana nataon’iray amin’ny fianakavian’ny zazavavy. Tsara ny manamarika fa araka ny lalàna velona, raha zaza tsy ampy taona no mandika lalàna, ny ray aman-dreny no tompon’antoka.
Miandry hatramin’ny faran’ny herinandro
Na izegny na tsy izegny, tsy misy maharatsy ny fifanatonan’ny ray aman-dreny roa tonta raha vonona hifampiraharaha tokoa ny an’ilay zazalahy. Fa araka ny fantatra, hatramin’ny omaly (talata) tsy mbola nanatona ny ray aman-drenin’ny zazavavy voa vetaveta ny ray aman-drenin’ilay zazalahy. « Miandry hatramin’ ny faran’ity herinandro ity izahay, ka raha tsy manatona anay ny ray aman-drenin’ny zazalahy nanolana zanakay, dia hanatona Fitsarana indray mandeha izahay ary mino izahay fa hanome rariny anay ny mpitsara misahana ny zaza tsy ampy taona », hoy ny fanambaràna nataon’ny fianakaviana sasany.
Andrasana arak’izegny ny mety ho tohin’ity raharaha fametavetana zazavavy 3 taona ity.
FAMETAVETANA ZAZA 3 TAONA
2015-10-07 16:59:19 par girite
tsimety raha manao firaharahana ohatrany zany ,nitokony dia
alefa any maison de corrécution lay zaza lahy ray amandreniny manefa domazy .sazy mihantona .miambina izy 18 ans manefa ny saziny .raha atao fanarahana afara manao foana lay zaza
ray amandreniny asaina manaramso tsara sy mambara fitodrantena mendrika .
2015-10-10 23:19:06 par JF
Miala tsiny amin’ny Ray amandrenin’ilay zaza voa vetaveta satria zavatra mamoafady tokoa izany ary indrindra fa zaza vao 2 taona monja.
Tsarovy anefa fa samy tsy ampy taona izy roa. Tsy fantatsika koa sao mba tsy salama saina koa ilay zazalahy ka any amin’ny "psychologue" no tokony hatao arofenitra mikasika an’izay.
Raha voamarina tsara fa tsy tomobana ara-tsaina ilay zazalahy dia tsy misy heloka azo ampiharina aminy na amin’ny Ray aman-dReniny fa alefa any amin’ny "centre de réeducation" ka ny fanjakana no miahy azy.
Raha tsy izany kosa anefa, tsy fantako aloha ny tena fahavoazana nihatra tamin’ilay zaza 2 taona na tena simba tokoa na tsia fa ny fihetsika ihany no tsy zakantsika gasy ; tsy tompon’ny tenany ilay nahavanon-doza ka ny RAD no tompon’andraikitra na "civilement responsable" ka arakarakin’ny fahavoazana no ameran’ny fitsarana ny "dommages et intérêts". Tsara ihany ny ifanatonan’ny RAD satria zaza tokony ho samy hanana ny ho aviny avy izy ireo. MAHEREZA DAHOLO !!!!
2015-10-14 10:16:42 par FAL
Inona moa izany no ilàna ny mpitsara raha toa ka mialangalana ohatr’izany fotsiny ry zareo, Ny fitsarana anie no mahalala ny article rehetra mikasika izany e, ny fitsarana zaza tsy ampy taona, raha ny fahalalako azy, anjarany ny mametra ny sazy sy ny lamandy tokony mifanandrify amin’izany, na salama saina na tsia ilay zazalahy, dia ny RAD tsy miala maina, satria mbola eo ambany fifehezany tsara mihitsy izany 12 ans izany.
Izaho kosa aloha dia manome rariny ireo RAD zazavavy kely, avela ho simbasimba fotsiny ve ny zanany, f’angaha tany tsy misy lalàna ity tany ity ? raha tsy hoe efa fanjakan’ny Baroa angaha ka mangina aho.